Hawaasni Muslimaa magaalaa Bichanaa soda hamaa keessa kan jiru tahuun gabaafame - NuuralHudaa
Hawaasni Muslimaa magaalaa Bichanaa soda hamaa keessa kan jiru tahuun gabaafame
Naannoo Amaaraa Godina Goojjaam keessatti haleellaan masjiidotaa fi qabeenya hawaasa muslimaa magaalaa Mooxaa irratti raawwatame, gara magaalaa Bichanaatti kan ce’e tahuu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun namoonni gurmaayan har’a manneen jireenyaa fi manneen daldalaa qabeenya hawaasa muslimaa magaalaa Bichaanaa irratti haleellaa raawwachuuf kan socho’aa jiran tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Odeeyfannoon naannicha irraa argame akka mul’isutti, namoonni gurmaayan manneen muslimootaa irra naannayuun tarkaanfiin kanaan dura isinirratti fudhatame gahaa waan hin tahiniif, ammas tarkaanfii dabalataa ni fudhanna jechuun kan dorsisaa jiran tahuu ibsame. Kanuma hordofuun hawaasni muslimaa waajjira bulchiinsa magaalichaatti kan iyyate yoo tahu, Kantiibaan magaalatti haalli jiru humna keenyaa ol waan taheef, qabeenyaa fi manneen amantaa keessan ofumaa eeggadhaa jechuu isaa odeeyfannoon argame ni mul’isa.
Haaluma kanaan hawaasni muslimaa magaalaa Bichanaa mootummaan Naannichaa fi Federaalaa hatattamaan akka isaanii birmatuuf kan gaafatan tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Kanaan duras magaalattii keessatti Masjiidonni gubamuu fi akkasumas finxaaleyyiin amantaa Ortodoksii haleellaa boombiin Masjiida irratti raawwataniin luubbuun namaa dabruun ni yaadatama.